कति स्वादिलो गिठ्ठाको अचार ? यस्तो छ अचार बनाउने विधि !! | सुदुरपश्चिम खबर
कति स्वादिलो गिठ्ठाको अचार ? यस्तो छ अचार बनाउने विधि !!
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७८ 54
नेपालमा गिठ्ठा र भ्याकुर भन्ने बित्तिकै चेपाङ जस्ता जनजातिको खानाको रुपमा चिन्ने गरिन्छ । अझभन्दा यो खाद्य संकट र भोकमरीको बेलामा खाने परिकारको रुपमा चिनिन्छ । तर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरुले गिठ्ठाबाट बनेका परिकारहरु स्वाद र पोषणका कारण धेरै देशले व्यवस्थित परिकारको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
दक्षिण कोरियाको एउटा उत्कृष्ट खाद्य परिकार हो, एरियल याम अर्थात् गिठ्ठा । जुन खानेकुरालाई हामी अनिकालको खाना मान्छौं, त्यो कुनै देशको विकसित खाद्य संस्कारभित्र अटाएको खानेकुरा हो । कार्बाेहाइड्रेड र रेसादार पदार्थका कारण यसले कब्जियत, कोलेस्ट्रोल जस्ता स्वास्थ्य समस्या कम गर्न मद्धत गर्छ भनिन्छ । यसमा रहेको भिटामिन बी र फेलिक एसिडले गर्भवतीभित्र रहेको भ्रूणको विकलांगताबाट जोगाउन मद्धत गर्छ ।
एक खोजका अनुसार संसारमा ६०० किसिमको गिठ्ठा पाइन्छ । पश्चिम अफ्रिकामा यसलाई औषधिको रुपमा प्रयोग हुन्छ, जापानमा र ब्रिटेनमा यसलाई नियमित खानाको रुपमा नै प्रयोग गरिन्छ ।
बेलायतको फुड साइन्स एण्ड क्वालिटी म्यानेजमेन्टले पूर्वी नाइजेरियामा गिठ्ठाको खाद्य संस्कार र त्यसमा पाइने पोषणको बारेमा अध्ययन गरेको थियो । जसबाट दक्षिण पूर्वी नाइजेरियामा गिठ्ठाबाट पाइने पोषणको बारेमा गरिएको गुणको आधारमा सेतो गिठ्ठाको तुलनामा वैजनी र पहेँलो रंगको गिठ्ठामा बढी पोषक तत्व भेटेको पाइएको छ ।
गिठ्ठाको अचार बनाउने विधि
४. भिण्डी (अझ स्वादिष्ट बनाउनको लागि)
५. पकाउनको लागि आवश्यक भाँडाकुँडा
६. आवश्यक मरमसला
७. चुक अमिलो
कसरी बनाउने गिट्ठाको अचार ?
गिठ्ठाको अचार पकाएर खाने अचार हो । बोटमा पाकेर छिप्पिएको गिठ्ठालाई ढुंगामा थेचार्दा गिट्ठाको बोक्रा आफैं निस्किन्छ । यसरी बोक्रा निकालेर काटेपछि तरकारी पकाए जसरी नुन मसला मिलाएर पकाउने गरिन्छ । पाकिसकेपछि त्यसमा चुक अमिलो हालेर यसलाई थप स्वादिष्ट बनाउने गरिन्छ ।
अचार मात्र होइन यस्तो शरीरको लागि उपयुक्त गिठ्ठालाई तरूल जसरी उसिनेर पनि खान सकिन्छ । अहिले गिठ्ठाको महत्वलाई बुझेर काठमाडौंमा समेत कौशीमा यसको खेती गर्न सुरु गरिएको छ । गाउँघरमा सामान्य ओसिलो ठाउँमा आफैं उम्रिएर अरु कुनैपनि रुखमा लहरा फैलिएपछि यो फल फल्ने गर्छ ।
गाउँघरतिर दशैंमा अचार बनाउनको लागि भनेर साउन भदौदेखि नै गिठ्ठा संकलन गरेर राखिन्छ । यो एक किसिमको कन्दमूल हो । शाकाहारी परिवारमा यसले मासुको जस्तै महत्व राख्ने गरेको छ ।
गिठ्ठाको पोषण महत्व
सामान्यतयाः गिट्ठा कुनैपनि झाडीमा उम्रिएर रुखमा आफैं लहरा फैलाएर फल्ने कन्दमूल हो । पौष्टिक रुपमा हेर्दा यसमा भिटामिनको ए, बी, सी, के, बी ६ र बी १२ लगायतका साथै यसमा प्रशस्त मात्रामा फाइबर पाइन्छ । चिकित्सकहरुका अनुसार गिट्ठामा फ्याट, कोलेस्ट्रोल र ट्रान्सफ्याटको मात्रा शून्य हुन्छ ।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मूल्य २ देखि ३ डलरसम्म पर्छ । यस्तो गिट्ठामा कार्बाेहाइड्रेड पोटासियम, सोडियम, क्याल्सियम, आइरन लगायत तत्वहरु पाइन्छ । यसमा क्यान्सर प्रतिरोधात्मक गुण समेत पर्याप्त हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
स्वाद र सन्तुष्टिसँगै जसरी केही समय अघिसम्म ग्रामीण भेगमा गुन्द्रूकको तरकारीलाई अभावमा गर्जो टार्ने तरकारीको रुपमा लिने गरिन्थ्यो । अहिले त्यो शहरी बस्तीमा मानिसको रोजाइको विषय बन्ने गर्छ । त्यसरी नै गिट्ठा अहिले कन्दमूलको रुपमा अभावको खाना नभएर देशको शाकाहारीहरुको विकल्पको खाना बन्ने गरेको छ । अनलाइनखबर बाट सभार